Soomaali / Somaliska - Praktikertjänst Psykiatri
Macluumaad loogu talo galay bukaanada iyo qarabadooda
Bukanada inta badan waxeey yimaadaan Praktikertjänst Psykiatri kadib marka dhaqtarkooda xaafada noo soo gudbiyo (Remiss). Dhaqtarka xaafada ayaa markaas soo qiimeeyay in eey qabaan xanuunka maskaxda ama xanuunka dhimirka, loona baahan yahay in Xarunta xanuunka-dhimirka (Psykiatrin) la wareegto masu´liyada caafimadka.
Qofku wuu na soo wici kara, isna diiwaan galin karaa kaligiis. Qof qaraabo ah ama ka socda xarun dowladeed dabcan wuu soo wici karaa badalka bukaanka, hadii aay kugu adagtahay in aad ku hadasho ama fahanto luuqada iswiidhiska. Waxaan qaabilna isdiiwaan galinta maalin kasta inta u dhaxeeysa saacada 08:00-22:00. Lakiin waxaa haboon in aad soo wacdo maalmaha shaqada inta u dhaxeeysa saacada 08:00-16:30. Taleefoon nambarka 08-128 89 400.
Waxaan qaadanaa qidmada booqashada, iyo karka bilaashka ah sida la mid ah laamaha caafimaadka ee dowliga Istockholm.
Warbixin ku saabsan Qidmadaha bukaanka waxaa ka heli kartaa: www.sll.se
Waxaad ku bixin kartaa lacagta Kaar ama lacag cad.
Hadii aad xiriir horey noola laheyd
Hadii aay kugu adagtahay luuqada iswiidhiska waxaan kuu qabaneynaa turjumaan ku hadla afka Soomaaliga. Waqti cusub waxaad ka sameysan kartaa qofka qaabilsan arimahaaga. Balanta hadaad kari weysid in aad timaadid waxaad la xiriirta qofka ku qaabilsan ama Xafiiska/ Receptionen, Kahor 4 saacadood wakhtiga balanta.
Taleefoonka Spånga 08-128 89 200
Taleefoonka Kista 08-128 89 250
Taleefoonka Rinkeby 08-128 89 450
Xilli kasta waad ku baajin kartaa balantada Cod-qabtaha taleefanka. Waana in aad sheegto Magacaaga, 10-kaaga Numbar, Qofka aad la kulmeeysid, Waqtiga iyo Saacada. Lacagta Qidmada waad bixineysa hadii aad ka baaqatid oodan soo sheegin 4saac kahor waqtiga balanta.
Xanuunada degdeg ah
Maalintii: Wac qofka ku qaabilsan ama xafiiska aad ka tirsantahay.
Galinka Danbe: Inta u dhaxeeysa 16:30- 22:00 ama maalmaha fasaxa ah 08:00-22:00 wac Järvapsykiatrin Jour och Akutgrupp Taleefanka 08-128 89 400.
Habeenkii: 22:00-08:00 la xiriir Qeybta qabilsan xaladaha xanuunka-dhimirka degdega ah oo ku yaalo isbitaalka St: Görans sjukhus taleefoonka nambarka 08-123 49 200.